तपाईँ कसरी ईश्‍वरलाई स्वीकार्य प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ? प्रभुको प्रार्थना—एउटा नमुना प्रार्थना
प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या १ २०२१
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक काजाक (अरबी) काबीय काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पलाअन पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मलावी साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन यापिज युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोङ्गा रोमानियन रोमानी (भ्लाक्स, रुस) लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
तपाईँ कसरी ईश्‍वरलाई स्वीकार्य प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ?
यहोवा “प्रार्थना सुन्‍नुहुने परमेश्‍वर” हुनुहुन्छ। (भजन ६५:२) हामी जहाँसुकै अनि जहिले पनि, आवाज निकालेर वा मनमनै उहाँलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यहोवा हामीले उहाँलाई “बुबा” भनेर पुकारेको चाहनुहुन्छ र उहाँ वास्तवमै सबैभन्दा असल बुबा हुनुहुन्छ। (मत्ति ६:९) हामी कसरी यहोवालाई स्वीकार्य प्रार्थना गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले मायालुपूर्वक सिकाउनुभएको छ।
यहोवा परमेश्‍वरलाई येसुको नाममा प्रार्थना गर्नुहोस्‌
“तिमीहरूले बुबासित जे मागे पनि मेरो नाममा उहाँले त्यो तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ।”—युहन्‍ना १६:२३.
येसुका शब्दहरूबाट यहोवा परमेश्‍वर हामीले उहाँलाई मूर्तिहरू, सन्तहरू, स्वर्गदूतहरू वा पितृहरूमार्फत नभई येसु ख्रिष्टको नाममा प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ भनेर स्पष्ट हुन्छ। ईश्‍वरलाई येसुको नाममा प्रार्थना गर्दा हामीले येसुको महत्त्वपूर्ण भूमिका स्विकारेको देखाइरहेका हुन्छौँ। येसुले यसो भन्‍नुभयो, “मबाहेक अरू कसैद्वारा कोही पनि बुबाकहाँ जान सक्दैन।”—युहन्‍ना १४:६.
मनैदेखि कुरा गर्नुहोस्‌
“तिमीहरूको मनको बह उहाँलाई पोखाओ।”—भजन ६२:८.
यहोवालाई प्रार्थना गर्दा एक जना मायालु बुबासित कुरा गरे जसरी नै कुरा गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्दा किताबबाट पढ्‌नु वा कण्ठ पारेको कुरा दोहोऱ्‍याउनुको साटो उहाँसित आदरपूर्वक मनैदेखि कुरा गर्नुपर्छ।
ईश्‍वरको इच्छासित मेल खाने प्रार्थना गर्नुहोस्‌
“उहाँको इच्छाबमोजिम हामीले जेसुकै मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्‍नुहुन्छ।”—१ युहन्‍ना ५:१४.
बाइबलमा यहोवा परमेश्‍वरले हाम्रो लागि के गर्नुहुनेछ अनि उहाँ हामीले के गरेको चाहनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। ईश्‍वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्‍नुभएको चाहन्छौँ भने हामीले “उहाँको इच्छाबमोजिम” प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले बाइबल पढेर ईश्‍वरलाई राम्रोसित चिन्‍नुपर्छ। त्यसो गऱ्‍यौँ भने हाम्रो प्रार्थनाले उहाँलाई खुसी तुल्याउनेछ।
हामी केको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ?
आफ्नो आवश्‍यकताको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्‌। हामी ईश्‍वरलाई आफ्ना दैनिक आवश्‍यकताहरू जस्तै, गाँस, बास अनि कपासको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। साथै प्रार्थनामार्फत सही निर्णय गर्नको लागि बुद्धि अनि परीक्षाहरू सहनको लागि बल माग्न सक्छौँ। अनि हाम्रो विश्‍वास बढाइदिन साथै क्षमा र मदत माग्न प्रार्थना गर्न सक्छौँ।—लुका ११:३, ४, १३; याकुब १:५, १७.
अरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्‌। मायालु आमाबुबा आफ्ना छोराछोरीले एकअर्कालाई प्रेम गर्दा खुसी हुन्छन्‌। त्यसरी नै यहोवा पनि पृथ्वीमा रहेका आफ्ना छोराछोरीले एकअर्काको ख्याल राखेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो जोडी, छोराछोरी, परिवार अनि साथीभाइहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। येसुका एक जना चेला याकुबले यस्तो लेखे: “एकअर्काका लागि प्रार्थना गर।”—याकुब ५:१६.
धन्यवाद दिनुहोस्‌। हाम्रो सृष्टिकर्ताबारे बाइबल यसो भन्छ: “भलो हुने काम गरेर . . . उहाँले तपाईँहरूलाई आकाशबाट वर्षा अनि ऋतुअनुसार प्रशस्त बाली दिनुभयो र खानेकुराले तृप्त पार्नुभयो अनि आनन्दले तपाईँहरूको हृदय भरिदिनुभयो।” (प्रेषित १४:१७) ईश्‍वरले हाम्रो लागि गरिदिनुभएका सबै कुरामा मनन गर्दा उहाँलाई प्रार्थनामार्फत धन्यवाद दिन उत्प्रेरित हुनेछौँ। पक्कै पनि, हामीले ईश्‍वरको आज्ञा पालन गरेर उहाँप्रति कृतज्ञ भएको देखाउनुपर्छ।—कलस्सी ३:१५.
धीरजी हुनुहोस्‌ र प्रार्थना गरिरहनुहोस्‌
मनैदेखि गरेको प्रार्थनाको जवाफ तुरुन्तै नपाउँदा कहिलेकाहीँ हामी निराश हुन सक्छौँ। के त्यसको मतलब ईश्‍वर हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्‍न? त्यस्तो त होइन! निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने आवश्‍यकता प्रस्ट पार्ने केही अनुभवहरू विचार गरौँ।
सुरुको लेखमा उल्लेख गरिएका स्टिभ यसो भन्छन्‌, “निरन्तर प्रार्थना नगरेको भए मेरो जिउने इच्छा नै मर्ने थियो।” तिनलाई परिवर्तन गर्न केले उत्प्रेरित गऱ्‍यो? तिनले बाइबल अध्ययन गर्न थाले र निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुपर्छ भनेर सिके। तिनी भन्छन्‌, “मेरा प्यारा साथीहरूमार्फत मलाई सम्हाल्नुभएकोमा म ईश्‍वरलाई प्रार्थनाद्वारा धन्यवाद दिन्छु। म यत्तिको आनन्दित पहिला कहिल्यै भएको थिइनँ।”
आफू ईश्‍वरलाई पुकार्न लायकको छैनँ भनेर महसुस गरेकी जेनीबारे चाहिँ के भन्‍न सकिन्छ? तिनी भन्छिन्‌, “आफूलाई साह्रै बेकामको महसुस गर्दा त्यस्तो महसुस गर्नुको कारण बुझ्न मदत गर्नुहोस्‌ भनेर ईश्‍वरलाई बिन्ती गरेँ।” त्यसले तिनलाई कसरी मदत गऱ्‍यो? तिनी भन्छिन्‌, “ईश्‍वरसित कुरा गरेर मैले आफूलाई उहाँको जस्तै दृष्टिकोणले हेर्न मदत पाएँ, आफैलाई बेकामको महसुस गरे तापनि उहाँ भने त्यस्तो सोच्नुहुन्‍न भनेर बुझ्न सकेँ। प्रार्थनाले मलाई हरेस नखान पनि मदत गरेको छ।” नतिजा कस्तो भयो? “प्रार्थनाले मलाई यहोवा एक वास्तविक, मायालु, ख्याल राख्नुहुने ईश्‍वर, बुबा अनि साथी हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न मदत गरेको छ। साथै उहाँको इच्छाअनुसार चल्ने कोसिस गर्दा उहाँले सधैँ मलाई साथ दिनुहुन्छ र मदत गर्नुहुन्छ भनेर पनि बुझ्न सकेकी छु।”
“अशक्‍त भए पनि उसले आनन्दित भई जीवन बिताइरहेको देख्नु नै मेरो प्रार्थनाको जवाफ हो” भनेर जेरार्डकी आमा इसाबेल भन्छिन्‌
इसाबेलको अनुभव पनि विचार गर्नुहोस्‌। तिनी गर्भवती हुँदा डाक्टरहरूले तिनको बच्चा अशक्‍त जन्मनेछ भनेर तिनलाई बताए। त्यो सुनेर तिनको मुटु छियाछिया भयो। कसै-कसैले तिनलाई गर्भपतन गर्न सल्लाह समेत दिए। तिनी भन्छिन्‌, “मनको पीडाले म मर्छु होला जस्तो लाग्यो।” तिनले के गरिन्‌? तिनी भन्छिन्‌, “मैले मदतको लागि ईश्‍वरलाई बारम्बार पुकारेँ।” केही समयपछि तिनले जेरार्डलाई जन्माइन्‌, जो अशक्‍त थिए। के इसाबेल ईश्‍वरले तिनको प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको महसुस गर्छिन्‌? पक्कै गर्छिन्‌! कसरी? इसाबेल भन्छिन्‌, “मेरो छोरा अहिले १४ वर्षको भयो। अशक्‍त भए पनि उसले आनन्दित भई जीवन बिताइरहेको देख्नु नै मेरो प्रार्थनाको जवाफ हो अनि ऊ यहोवाले दिनुभएको सबैभन्दा ठूलो आशिष्‌ हो भनेर महसुस गर्छु।”
यी मनै छुने अभिव्यक्‍तिहरूले हामीलाई एक भजनहारका शब्दहरू सम्झना गराउँछ: “हे यहोवा, तपाईँ भने दुःखीहरूको पुकारा सुन्‍नुहुन्छ। तपाईँ तिनीहरूलाई आँटिलो बनाउनुहुन्छ र तिनीहरूको बिन्तीमा ध्यान दिनुहुन्छ।” (भजन १०:१७) निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने कस्तो सशक्‍त कारण!
बाइबलमा येसुका थुप्रै प्रार्थना रेकर्ड गरिएका छन्‌। तीमध्ये सबैभन्दा प्रख्यात उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनुभएको प्रार्थना हो। त्यस प्रार्थनाबाट हामी के सिक्न सक्छौँ?
प्रभुको प्रार्थना—एउटा नमुना प्रार्थना
डाँडाको उपदेशमा येसुले आफ्ना चेलाहरूलाई नमुना प्रार्थना सिकाउनुभयो, जसलाई अक्सर प्रभुको प्रार्थना पनि भनिन्छ। (मत्ति ६:९-१३; लुका ११:२-४ पनि हेर्नुहोस्‌।) शताब्दियौँको दौडान यो प्रार्थना यत्ति प्रख्यात भएको छ कि थुप्रैले यसलाई कण्ठ पारेका छन्‌ र जस्ताको तस्तै दोहोऱ्‍याउँछन्‌। तर के येसु हामीले यसो गरेको चाहनुहुन्थ्यो? अहँ, चाहनुहुन्‍नथ्यो। त्यस उपदेशको सुरुतिर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्दा एउटै कुरा नदोहोऱ्‍याउन सिकाउनुभएको थियो। (मत्ति ६:७) वास्तवमा येसुले आफ्ना चेलाहरूलाई कसरी र केको लागि प्रार्थना गर्ने भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नमुना प्रार्थनाबाट के सिक्न सक्छौँ, विचार गरौँ।
“हे स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा बुबा”
हामीले ईश्‍वरलाई मात्र प्रार्थना गर्नुपर्छ।
“तपाईँको नाम पवित्र पारियोस्‌”
हामीले ईश्‍वरको नाम यहोवालाई आदर गर्नुपर्छ र पवित्र ठान्‍नुपर्छ।
“तपाईँको राज्य आओस्‌”
ईश्‍वरको राज्य स्वर्गीय सरकार हो, जसको राजा येसु हुनुहुन्छ र त्यस राज्यले चाँडै पूरै पृथ्वीमाथि शासन थाल्नेछ।
“तपाईँको इच्छा जसरी स्वर्गमा पूरा हुन्छ, त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि पूरा होस्‌”
शान्ति र सुरक्षा छाएको पृथ्वीमा मानिसजाति सधैँभरि बाँचेको ईश्‍वर चाहनुहुन्छ।
“हामीलाई आजको लागि भोजन दिनुहोस्‌”
हामीलाई बाँच्नको लागि चाहिने कुराहरूको प्रबन्ध गर्नुहुने यहोवा हुनुहुन्छ।
“हाम्रो ऋण क्षमा गर्नुहोस्‌”
हामी सबै जना धेरै पटक गल्ती गर्छौँ र हामीलाई क्षमा चाहिन्छ।
यी कुराहरू मनमा राख्नुभयो भने तपाईँले अझ अर्थपूर्ण प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने तपाईँ कसरी ईश्‍वरलाई स्वीकार्य प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ?
wp२१ सङ्‌ख्या १ पृ. १०-१३
मानिसहरू प्रार्थनाबारे के भन्छन्‌?
के ईश्‍वर हाम्रो प्रार्थना सुन्‍नुहुन्छ?
ईश्‍वरले किन सबै प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्‍न?
प्रार्थना गर्दा तपाईँलाई कस्तो फाइदा हुन्छ?
के ईश्‍वर तपाईँको प्रार्थना सुन्‍नुहुन्छ?
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा प्रार्थना किन गर्ने?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा प्रार्थना किन गर्ने?
प्रार्थना किन गर्ने?
प्रहरीधरहरा प्रार्थना किन गर्ने?
ईश्‍वरको अनुमोदन पाउन नियमित प्रार्थना गर्नुहोस्‌